Dubai Delight | Bandhiga Caalamiga ah & Xidhmada fasaxa
Maalmaha 04 / Maalmaha 05
| Code Code: G-5020
Markaad tagto Garoonka Caalamiga ah ee Dubai, waxaa lagugu martiqaadi doonaa hudheelkaaga wakiilkaaga.
Isku day in aad ku jirto hoteelka, naso oo aad inta kale ku qaadato waqtiga firaaqada.
Madax ka baxa hudheelka fiidkii iyo hubi suuqyada. Haddii aad rabto khibrad Amar asal ah, booqo mid ka mid ah suuqyada badan ee Bur Dubai. Sidoo kale waa agagaaraha taariikhda Bastakia ee taariikhiga ah kaas oo caan ku ah guryaha dabiiciga ah ee dib loo soo celiyay iyo dabaylaha.
Cuntada makhaayadda Indian
Habeen hudheel ah hoteelka.
Si degdeg ah u jab
Ka dib markii quraac buuxda ah waxaad bilaabi doontaa safar maalin dhaaf ah magaalada. Booqashadu waxay kuu geyneysaa Bur Dubai Creek, Suuqa Spice. Waxaad joojin kartaa sawir-joojin la yiraahdo Burj al-Carabi, oo kaliya hotelka xiddiga ah ee 7 ee dunida. Laga soo bilaabo halkan waxaad madaxa u soo baxday Palm Island iyo ammaanta taajirka, Atlantis ee Palm Hotel. Barta sare ee safarka waa hubaal masrax madow oo Jumeirah ah. Fadlan ogow in aanad xirnayn dharka, dhabarka iyo gacmaha waa in la daboolaa, dumarkuna waxay u baahan yihiin inay madaxooda ku daboolaan madaxa. Safarkan waxaad sidoo kale booqan doontaa guryaha Carabta oo leh qaabdhismeedkooda dhaqameed.
SIYAAB AH ISTICMAALKA
Fiidnimadii waxaad ku socon doontaa safarka dhow ee Dubai Creek. Dhowrku waa carbuunyahano carabi ah oo carab ah oo aan badnayn isbeddello qarniyo badan. Socdaalku wuxuu bixiyaa aragti ka duwan Dubai. Dhinac dhinac ah waa Deira, taas oo ahayd, ujeedooyin kasta oo la taaban karo, magaalada oo dhan ilaa Dubai ilaa 1990. Dhinaca kale waa Dubai casriga ah oo leh waddooyin balaadhan iyo qurxiyo dheeraan ah. Casho (barkeed) wuxuu ku jiri doonaa golaha dhow.
Qaado quraac quruxsan oo aad ku raaxeysan kartid hudheelkaaga inta aad haysatid subaxa xilliga firaaqada.
Galabtii, waxaad bilaabi kartaa degaankaaga Saferi. Waxaa laguu qaadayaa lamadegaanka. Dib u fariiso oo ku raaxee sida ay baabuurtu u xajinayaan qulqulka ciidda si aan waxtar lahayn. Doon-joojinta, haddii aad rabto! Fiiri qorraxda hoos udhigaysa qorraxda ka soo baxa dune ugu sareeya. Qorrax-dhaca qoyan sidoo kale waxay ka dhigtaa midka ugu fiican ee sawirrada qoyska ee la xasuusto. Haddii baabuurka buuqu uu u muuqdo mid casri ah, qaado geela. Waxa kale oo aad ku dhejin kartaa meel lagu dhejiyo naqshadeeynta caanaha iyo sheesha. Casho barbecue ah ayaa loo adeegi doonaa muraayad carabi ah oo carbeed ah halka qoob-cayaaraha caloosha kuugu raaxeysto dhaqdhaqaaqeeda. Maaddaama fiidkii cajiibka ah uu yimaado dhamaadka, waxaa laguu soo celin doonaa hudheelkaaga
Maanta, quraacda ka dib, waxaad haysataa inta kale ee ah xilliga firaaqada.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan soo jeedinaynaa in aad fursadaan ka qaadato Burj Khalifa, dhismaha ugu dheer dunida. Wac waa wax cajiib ah ama sareeya, ma jirto wax diidmo ah in Burj Khalifa uu yahay dhisme muuqaal ah oo ah dhismaha iyo injineernimada. Dhismaha ugu dheer dhismaha adduunka ayaa 828m (toddoba jeer ku dhuftay Big Ben) wuxuuna furay 4 Janaayo 2010, lix sano oo kaliya ka dib markii la bilaabay qalliin. Illaa iyo habeenkii shaqaalaha 13,000 waxay shaqeeyaan maalin iyo habeen, marar badan oo dhulka la dhigo ugu yaraan saddex maalmood. Soo jiidashada ugu muhiimsan waa 'Loogu Talagalay' Dusha 'Xagga sare' ee dabaqa 124th. Meelaha aadka u sarreeya aad si fudud u fahmi karto Dunida, seddexda horumarinta Palm iyo dhulalka kale. Halkaas wuxuu kuugu keenayaa bandhigyo farshaxanimo oo kala duwan oo ah qaylo-dhaf ah oo laba jibbaaran oo ku dhajiya 10m daqiiqad dhan daqiiqad dhan si aad u gaarto heerka 124 ee 442m sare ee hawada. Dhamaadka safarka, ku noqo hudheelkaaga
Ka dib quraacda, ka soo qaado hoteelka. Waxaa laguu wareejin doonaa garoonka diyaaradaha si aad ugu soo qaadato duulimaadkiina guriga.
Ku noqo duulimaad dhaqaale oo ku socda shirkadda Indigo
Hoyga 4 / 05 maalmaha
Quraac maalinle ah iyo Casho
Kharashka fiisada UAE waxaa ka mid ah
Hadaad u baahato kharashka
Ku noqo bedelka garoonka diyaaradaha ee SIC (kursiga koowaad)